Novambra 2014 1 Lahatsoratra Jolay 2014 1 Lahatsoratra Jona 2014 1 Lahatsoratra Avrily 2014 1 Lahatsoratra Febroary 2014 1 Lahatsoratra Desambra 2013 1 Lahatsoratra Oktobra 2013 1 Lahatsoratra Septambra 2013 2 Lahatsoratra
Febroary 2013 1 Lahatsoratra Novambra 2012 1 Lahatsoratra Septambra 2012 1 Lahatsoratra Tantara misongadina mikasika ny Tajik	“Helo ho an'ny pelaka” i Tajikistan Lohahevitra fady ny resaka pelaka ao Tajikistan. Na dia efa ho dimy amby folo taona aza izao no tsy mahavoasazy intsony ny fiarahan’ny mitovy fananahana ao amin’ity firenena, dia mbola vitsy ireo mahazaka ny fisian'izy ireo ao amin’ny fiaraha-monina mitandro ny fomban-drazana. Ankoatra ny fihetsika fankahalana pelaka, lasa lasibatry ny...
08 Avrily 2015 Tajik Mpifindra Monina Ao Rosia: Filaharana Ny Fiainana, Avy eo Maty ianao Mpanoratra Farrukh Umari · Azia Afovoany sy Kaokazy 27 Novambra 2014 Mbola Miady hevitra Ny Lafitsara Sy Ny Lafiratsin'ny “Halloween” i Tajikistana Mpanoratra Zukhra Iakupbaeva · Azia Afovoany sy Kaokazy 03 Febroary 2013 “Helo ho an'ny pelaka” i Tajikistan Mpanoratra Alexander Sodiqov · Azia Afovoany sy Kaokazy Tantara Malaza Indrindra Manerantany 04 Janoary 2015JamaikaAo Jamaika: Afaka Manao Izay Hanaitaitra Ve No Sady Hitàna Biraom-panjakàna Ny Vehivavy?
Tantara mikasika ny Tajik 28 Jolay 2015
Ny Fomba Nahazoan'ny Ankizilahy Iray Mpianatra, “Zanaky”-ny Filohan'ny Tajikistan, Tsolotra Be Dia Be Tamin'ny Olon-tsotra Mpanoratra Farrukh Umari · Azia Afovoany sy Kaokazy "Miloka aho fa zanaka mpiasam-panjakana hafa io, satria isika tsy afaka ny hampianatra ireo zanantsika ao amin'io sekoly io mihitsy."
‘Hano Ny ***Ako Ry Mp***Reny!': Niteraka Resabe Tao Tajikistan Ilay Mpanolotsaina Voafidy Vao Haingana Mpanoratra Farrukh Umari · Azia Afovoany sy Kaokazy Raha ompa na teny ratsy no voambolana mba hainao amin'ny fiteny hafa, tsara raha tsy miloa-bava mihitsy.
Mila Fampianarana Ara-Pananahana Ve i Tajikistan? Mpanoratra Farrukh Umari · Azia Afovoany sy Kaokazy Ao amin'ny firenena izay tokony ho virijiny avokoa ny vehivavy alohan'ny fanambadiana, mampiadi-hevitra ny tolo-kevitra mikasika ny fampianarana ara-pananahana any an-tsekoly. Saingy efa mihatra izany ankehitriny.